Ahoana ny fomba hifehezana ny fitaintainanana amin'ny fampiasana Baiboly ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ahoana no hifehezana ny fitaintainanana amin'ny fampiasana Baiboly. Miseho ny fanahiana a fahatsapana tahotra sy tsy fitoniana amin'ny toe-javatra samihafa. Noho izany, zava-dehibe izany mianatra mifehy azy ka tsy mandringa na mametra anao izany.
Mety ho sarotra ny mifehy ny tebiteby. Na izany aza, azonao atao amin'ny fanampian'Andriamanitra izany. ny Mampiseho ny fomba hampihenana ny fanahiana ny Baiboly miaraka amin'ny fanampian'i Jesosy. Tsy mila miatrika irery ny fanahiana ianao. Momba anao Andriamanitra.
Ireto misy torohevitra vitsivitsy momba ny fomba hifehezana ny fanahiana araka ny Baiboly:
1 Ahoana no hifehezana ny fitaintainanana amin'ny fampiasana Baiboly
1.1 1. Ianaro izay lazain'ny Baiboly
1.2 2. Omeo an’Andriamanitra ny fanahianao
1.3 3. Mitadiava fomba fijery vaovao
1.4 4. Vahao tsirairay ny olana tsirairay
1.5 5. Mitadiava fanampiana
1. Ianaro izay lazain'ny Baiboly
Miresaka Andriamanitra Tsitoha ny Baiboly, izay tia anao ary mifehy ny fiainanao. Raha omenao azy ny fiainanao dia tsy tokony hatahotra ny ho avy ianao, satria Izy no mikarakara anao. Rehefa mamaky Baiboly ianao, dia ho hitanao ny fomba anaovany izany Andriamanitra dia tsara, hendry, marina ary tsy ho levona mandrakizay.
Aza manahy na amin'inona na amin'inona, raha tsy ho fantatr'Andriamanitra eo am-bavaka sy amin'ny fivavahana rehetra ny fangatahanao, amin'ny fisaorana.
Ary ny fiadanan'Andriamanitra, izay mihoatra ny fahalalana rehetra, hiambina ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'i Kristy Jesosy.
Filipiana 4: 6-7
2. Omeo an’Andriamanitra ny fanahianao
Ny fanahiana dia toy ny enta-mavesatra. Omeo an’Andriamanitra ny enta-mavesatra. Miresaka momba ny fanahianao ary manontania hoe "Raiso ity, tsy zakako irery izany." Matokia an'Andriamanitra ary avelao Izy hifehy ny fiainanao. Isaky ny mitebiteby loatra ianao dia teneno Andriamanitra ary omeo azy ny fanahiana.
Apetraho aminy ny fanahianao rehetra, satria miahy anao izy.
1 Petera 5: 7
3. Mitadiava fomba fijery vaovao
Ny fomba tsara hifehezana ny fitaintainanana dia jereo amin'ny toe-javatra misimisy kokoa ny toe-javatra. Raha nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy anao ianao dia manana antoka roa momba ny ho avy:
Tsy handao anao mihitsy Jesosy.
Ataovy fahazarana tsy misy fitiavam-bola, afa-po amin'izay anananao izao; satria hoy izy: Tsy handao anao na hahafoy anao aho. Heb. 13: 5
Ho any an-danitra ianao, mankany amin'ny fiainana mandrakizay.
Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka ahy dia manana fiainana mandrakizay; ary tsy ho tonga amin'ny fanamelohana izany, fa niampita tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Jaona 5:24
Ireto zavatra roa ireto dia azo antoka na inona na inona mitranga amin'ny fiainanao. Na inona na inona mitranga dia hikarakara anao Andriamanitra. Amin'ny fotoana sarotra indrindra amin'ny fiainana, miaraka amin'ny fanahiana be, tsarovy izany.
Ny fametrahana azy amin'ny fomba fijery dia manampy amin'ny fifehezana ny fitaintainana amin'ny zavatra kely kokoa. Ny fahazoana isa ambany amin'ny fitsapana na ny tsy fisian'ny bus dia tsy hanimba ny fiainanao manontolo. Ny fitebitebena dia tsy manampy amin'ny famahana ny olan'ny fiainana.
Ary iza aminareo no mahay manampy iray hakiho ny halavany, raha manahy?
Fa raha ny kely indrindra aza tsy hainao, maninona ianao no manahy ny amin'ny sisa?
Lioka 12: 25-26
4. Vahao tsirairay ny olana tsirairay
Ny tebiteby dia matetika vokatry ny fieritreretana olana maro loatra miaraka. Rehefa mitranga izany dia tsy maintsy alaminao ny laharam-pahamehanao. Ny olana rahampitso dia tsy mendrika ahiahy. Mifantoha fotsiny amin'ny famahana ny olana ankehitriny ary avelao eo am-pelatanan'Andriamanitra ny ho avy. Aza manandrana mamaha ny zavatra rehetra amin'ny fotoana iray; mamaha olana iray isaky ny mandeha.
Aza manahy momba ny rahampitso, satria ny ampitso no hitondra ny fanahiany. Ampy ho an'ny isan'andro ny ratsy ataon'ny tenany.
Matio 6: 34
5. Mitadiava fanampiana
Tsy irery ianao. Tsy mora foana ny mifehy ny tebiteby, fa Mampiasa olona hafa Andriamanitra hanampy anao. Ny miaraka amin'ireo olona efa nianatra niatrika tebiteby dia tsara ny mahita ny fomba fitantanana azy amin'ny fomba azo ampiharina. Ka mangataha fanampiana amin'ny pasitera na mpitarika azo antoka hitarika anao. Raha miteraka olana ara-batana ianao, dia mitadiava fanampiana ara-pitsaboana ihany koa.
Ny alahelo ao am-pon'ny olona dia mavesatra azy;
Fa ny teny tsara dia mahafaly azy.
- Ohabolana 12:25
Izany no izy! Manantena izahay fa hanampy anao hahalala ity lahatsoratra ity ny fomba hifehezana ny fitaintainanana amin'ny fampiasana Baiboly. Aza adino fa momba anao Andriamanitra, fa tsy miady ho anao, noho izany, ny fahavononanao hanova toe-javatra dia zava-dehibe amin'ity dingana ity.
Raha tianao ity lahatsoratra ity ary izao dia te hahafantatra ianao inona no lazain'ny Baiboly momba ny famoizam-po, manohy mizaha Discover.online.